Don't Miss it के तपाईको दाँत अमिलो खादा कुडिने गर्छ ? कसरी निराकरण गर्ने ? जानीराखौ
Up Next कसरी सफल बन्ने ? आफूले आफूलाई कसरी प्रेरित गर्ने ? एकपटक अवश्य पढ्नुहोला
​अलैंचीका फाइदाहरु यस्ता छन्
अलैंचीले हाम्रो शरीरका धेरै रोगबाट छुटकारा दिलाउँछ । साथै यसको प्रयोगले छालामा पनि निखार ल्याउँछ । अलैंचीको दानालाई राम्रोसँग पिसेर प्रयोग…